काठमाडौँमै लखेटी लखेटी कुटे सहसचिवलाई - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति :9August, 2019 7:08 pm
काठमाडौँ । सेवा लिन आएका दुईजना सेवाग्राहीले नेपाल सरकारका सहसचिवस्तरका एक कर्मचारीलाई कार्यालय भित्रै कुटपिट गरेका छन् ।
कुकुरको उपचार गराउन केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, त्रिपुरेश्वर पुगेका चिराग सुवेदी र बलराम आचार्यले कार्यालय प्रमुख डा. बलराम थापालाई लखेटी लखेटी कुटेका हुन् ।
चिकित्सालयमा पु¥याइएको बिरामी कुकुरबारे डा. थापाले सेवाग्राहीसँग सोधपुछका क्रममा भनाभन हुँदै भक्तपुर, गट्ठाघरका सुवेदी र उनीसँगै आएका आचार्यले हातपात सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उपचार छोडेर बाहिर निस्केका डा. थापालाई लखेट्दै लगेर बेस्सरी भकुरेको कार्यालयका एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए ।
कार्यालय प्रमुख माथि नै हातपात गरेको देखेपछि दौडेर आएका अन्य कर्मचारीहरूले प्रमुख थापालाई जोगाएका थिए । उनको नाकका गम्भीर चोट लाग्नुका साथै शरीरका अन्य भागमासमेत चोटपटक लागेको छ । उनी टिचिङ अस्पतालमा उपचारपछि घर आएका छन् ।
थापालाई कुटपिट गर्ने दुबैजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
घटनाको विषयलाई लिएर नेपाल पारा भेटेरिनरी एन्ड लाईभष्टक एसोसिएसन, नेपाल भेटेरीनरी एसोसिएसन र भेटेरीनरी अभ्यास कर्ता संघ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषी माथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । यसैबिच र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालयले घटनाको छानबिन तथा अपराधीलाई कारबाही नभएसम्मका लागि चिकित्सालय बन्द रहने जनाएको छ ।
4 June, 2020 10:46 am
सुर्खेतको क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका युवकको मृत्यु
काठमाडौं । सुर्खेतको क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका एक युवकको मृत्यु भएको
4 June, 2020 10:26 am
डोटीमा क्वारेन्टिनभित्रै दुई महिलाले जन्माए बच्चा
डोटी । क्वारेन्टिन भित्र बसेका दुई जना महिलाले बच्चा जन्माएका